ချစ်ရပါသော အံစာတုံး သို့ မွေးနေ့ဆုတောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ချစ်ရပါသော အံစာတုံး သို့ မွေးနေ့ဆုတောင်း	9
ချစ်ရပါသော အံစာတုံး သို့ မွေးနေ့ဆုတောင်း
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Feb 17, 2016 in Creative Writing, Poetry, Relationships & Family |9comments
Happy Birthday ပါ ကို…
kai says: မိဘကျေးဇူးဆပ်ဆိုတာမျိုးက.. အိမ်ထောင်ကျ…ပါတနာကိုယ်စီရှိအချိန်မျိုး အတွက်… တော်တော်ဂွကျ…
နှစ်ဖက်မိဘကျေးဇူးတွေ ၀ိုင်းထိုင်ဆပ်နေပြီး.. ကိုယ့်မိသားစုဘ၀ရှေ့ရေးအတွက်.. ဒုက္ခတွေများကုန်တတ်တာလည်း…ရှိ..။
သားသမီးနဲ့.. မိဘ.. ဘယ်သူ့ရွေးကြရတယ်ထင်သလဲ…။ ဆိုလိုချင်တာက..”မိဘကျေးဇူးဆပ်” အဲဒီ.. ကွန်ဆာဗေးတစ်အတွေးအခေါ်ကို… နည်းနည်းစီတော့ ဖြေလျှော့ ပြင်သင့်ပြီလို့.. ထင်..။
သင့်အေးရိပ် says: မိဘ ကျေးဇူးဆပ် နေလို့… (ရသမျှ ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ပေး…. အသုံးအစွဲ စီမံခန့်ခွဲမှု မကျစ်လစ်တဲ့မိဘတွေလက်ထဲ…. ရသမျှက သဲထဲရေသွန်ကုန်သွား ) အခုချိန်ကျတော့…ကိုယ့်ဘဝ ရှေ့ရေးအတွက်က ဘာမှ ဖြစ်မလာ….
ဆိုတော့ သကြီးရဲ့ အယူအဆကို
အခုတော့…. အသည်း နည်းနည်း မာ ထားရတဲ့ ကျနော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: မွေးလာခဲ့ထဲက ကျောင်းနေ အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်အထိ
အစိုးရက အချိုးကျ တာဝန်ယူတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ကျေးဇူးကို အားချင်းတွေ ဆပ်စရာမလိုဘူးပေါ့ ဂျာ။
ဦးကြောင်ကြီး says: အံစာတုံး သန်လျှာဆုံး နန်ဒါပြုံး လှံကာ၃
ကထူးဆန်း says: Happy Birthday ပါ အံစာ ရေ .
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဆန္ဒနဲ့ ဘွ တစ်ထည်းတည်း ကျပါစေ လို့
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .မြန်မြန်ပေါင်းကြရပါစေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
သင့်အေးရိပ် says: .ရွာထဲ…. အံအံ့ရဲ့ ပွိုင့်တစ်သိန်းပြည့်တဲ့နေ့ …
သူကြီးဆီက တစ်သိန်းရတဲ့နေ့ကျ…. လက်ထပ်ကြမယ်လို့များ ဆုံးဖြတ်ထားကြသလား… တကယ်လို့ အဲ့လိုတွေးထားရင်…
.မြန်မြန်ပြည့်ပြီး… မြန်မြန် ညားကြစေကြောင်း… ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါကြာင်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဖေ့စဘွတ်မှာ ဆုတောင်းပေးပီးပီနော် တုံးလေး